ရေတလမ်းကုန်းတလမ်း အဖြေဆန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
Chinese-funded global development strategy and frameworkတမ်းပလိတ်:SHORTDESC:Chinese-funded global development strategy and framework
၂၀၁၃; ၉ နှစ် အကြာက (၂၀၁၃)
၂၀၁၇ (၂၀၁၇) (Forum)
ရေတလမ်းကုန်းတလမ်းအဖြေဆန်း (အင်္ဂလိပ်: Belt and Road Initiative) ဟူသည် ယခင်က တရုပ်ပြည်တွင်း၌သုံးစွဲသည့်အမည် ရေတလမ်းကုန်းတလမ်း (တရုတ်: 一带一路) အမည်ဖြင့် လူသိများသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမဟာဗျူဟာဖြစ်ပြီး တရုပ်အစိုးရက ၂၀၁၃ ခုတွင် စတင်ဖော်ဆောင်သည်။ နိုင်ငံနှင့် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၇၀ နီးပါးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုသည်။ တရုပ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အတွင်းရေးမှူးနှင့် နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ရှီကျင့်ဖျင်၏ အဓိကနိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။  ၂၀၁၃ ခု၊ စက်တင်ဘာလတွင် ကာဇက်စတန်သို့ တရားဝင်အလည်အပတ်သွားစဉ် ပိုးလမ်းမ စီးပွားရေးခါးပတ်ကို ဖော်ဆောင်မည်မှ စတင်ပြောဖူးသည်။ 
ခါးပတ်ဟူသည် ပိုးလမ်းမ စီးပွားရေးခါးပတ်ကို အတိုကောက်သုံးခြင်းဖြစ်ပြီး ကားလမ်း ရထားလမ်းများကို ကုန်းတွင်းပိတ် ဗဟိုအာရှဒေသမှဖြတ်ကာ သမိုင်းဝင် ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများအတိုင်း အနောက်ဘက် (ဥရောပနိုင်ငံများ) သို့ ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။ လမ်းမှာမူ ၂၁ ရာစု ရေကြောင်း ပိုးလမ်းမကို အတိုကောက်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှကိုဖြတ်ကာ တောင်အာရှ၊ ယင်းမှသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိကတို့သို့ ဆက်သွယ်မည့် အင်ဒို-ပစိဖိတ် ပင်လယ်ရေကြောင်းကို ဆိုလိုသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့တွင် ဆိပ်ကမ်း၊ အထပ်မြင့်အဆောက်အဦ၊ ရထားလမ်း၊ လေဆိပ်၊ ဆည်၊ လိုဏ်ခေါင်းလမ်းများ ပါဝင်သည်။
ရေတလမ်းကုန်းတလမ်းအဖြေဆန်းဟူသော လုပ်ငန်းကို တရုပ်အခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ၂၀၁၇ ခုတွင် စတင်ထူထောင်သည်။ တရုပ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံထူထောင်သည့် နှစ် ၁၀၀ ပြည့် ၂၀၄၉ ခုတွင် ပြီးစီးနိုင်မည် ခန့်မှန်းထားသည်။ အကောင်းမြင်သူ အဆိုးမြင်သူများ ရှိကြသည်အနက် အဓိကဆန့်ကျင်နေသူမှာ အမေရိကန်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း မေးအံ့။ ယင်းကို တရုပ်ဗဟိုပြု နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကွန်ယက်ဟု ရှုမြင်သောကြောင့်တည်း။  ယင်းကို ကာပြန်သည့်အနေဖြင့် အမေရိကန်၊ ဂျပန်နှင့် ဩစတေးလျတို့ ပေါင်းကာ အပြာစက်ကွန်ယက်အမည်ရှိ အခြေခံအဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်မှု ဆန်းစစ်ရေးလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၉ ခုတွင် ထူထောင်ထားသည်။  စီးပွားရေးအကြံပေးအဖွဲ့တခုမှ လေ့လာချက်အရမူ ရေတလမ်းကုန်းတမ်းအစီအစဉ်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂျီဒီပီကို ၂၀၄၀ ပြည့်မှစ၍ တနှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၇.၁ ထြီလျံမျှ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ကြောင်း ဆိုသည်။ 
↑ "The pandemic is hurting China's Belt and Road Initiative". The Economist.4June 2020. ISSN 0013-0613. Archived from the original on 19 December 2020. Retrieved 14 June 2020.
↑ Compare: "Getting lost in 'One Belt, One Road'". Hong Kong Economic Journal. 12 April 2016. Archived from the original on 14 April 2016. Retrieved 13 April 2016. Simply put, China is trying to buy friendship and political influence by investing massive amounts of money on infrastructure in countries along the 'One Belt, One Road'.
↑ "What is the Blue Dot Network and is it really the West's response to China's Belt and Road project?". ABC News. 8 November 2019. Archived from the original on5March 2020. Retrieved 28 February 2020.
↑ "New report on the Chinese Belt and Road Initiative predicts boost to global GDP "by over $7 trillion per annum". CIOB. Retrieved 20 July 2021.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရေတလမ်းကုန်းတလမ်း_အဖြေဆန်း&oldid=689729" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၁၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။